ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ကျနော်နှင့်ထိုင်းစာ
ခုတော့ အကုန် မေ့ကုန်ပြီ ..
မှတ်မိတယ် .. :D
လက်ရေးလေးတွေ လှလှချည့်လား..မေကျောက်တို့တော့ စာကိုမှန်းဖတ်တာပဲ..ဗမာစာနဲ့ ဗျည်းသရ သိတ်မကွာတော့ မှန်းလို့တော့ရတယ်..
ထိုင်းစာဆိုလို့ မောင်မျိုးတော့ ထိုင်းအစားအစာတွေ ချက်ပြီး တင်ထားတယ် ထင်နေတာ။
ဒီထိုင်းစာလဲ ကြည့်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသားပဲ။
မောင်မျိုးက လက်ရေးလဲလှတယ်၊ အမှန်တွေလဲ အများကြီးရတယ်။ တော်လိုက်တာ ...
လက်ရေးလေးလှတယ်..မြန်မာလက်ရေးလည်းလှမယ့်ပုံပဲ... ” ထိုင်းနိုင်ငံတော်သီချင်း” လို့ရေးထားတာ လှတယ်..
ဟုတ်တယ်..စာလုံးလေးတွေ တော်တော်လှတယ်၊ ဘာသာစကားတွေက အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်၊ ဘယ်စကားပဲ တတ်ထားတတ်ထား၊ မမှားပါဘူး၊ ဖတ်စရာတွေ နေ့စဉ်မြင်နေရတဲ့ နေရာမှာ နေတော့ ညီ အမြန်ဆုံး ကျွမ်းကျင်လာမှာပါ...။
ထိုင်းစကားက နားထောင်လို့တော့ကောင်းသားဟ မိမျိုးရ..၊
ဟုတ်တယ်ဗျ။ မောင်မျိုးရဲ့ Hand Writing က အတော်လှပဲ။ စာအုပ်ထဲရေးထားတာလည်း သပ်ရပ်နေတာပဲ။ သူငယ်တန်းကို ကျော်မှ ပါရဂူအထိဖြစ်နိုင်တာ မောင်မျိုးရဲ့။ ကြိုးစား၊ ကြိုးစား။ စိတ်ဝင်စားလို့ သင်တာပဲ။ ဖြစ်ထွန်းအုံးမှာ။ နောက်ဆို ထိုင်းမှာပဲ Tour Gide လုပ်ပေါ့ နော်,,,, :)
ထိုင်းစာ ဆိုလို့ သဘောင်္သီးထောင်းလားလို့ .. :D
အားပေးတယ် .. ကြိုးစားထားကွ ..း)
ပညာလိုချင်ရင် ..တတ်ချင်ရင် ဖြစ်ပါတယ် ..
အဲ ..လိုချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ သာ ...
(သူများသာပြောတာ ..ကိုယ်က ပျင်း၏)
ထိုင်းစာကနေ ဘာသာပြန်ပြီး တင်မဲ့ပိုစ့်တွေကို မျှော်နေပါမယ်
အမြန်ဆုံး တင်နိုင်ပါစေလို့ ..
ထိုင်းမလေးတွေကိုလည်း ရည်းစားစာ များများပေးနိုင်ပါစေး)
ဆောင်းနှင်းရွက်...ဟူုတ်ပါ့ဗျာ နောက်ပြီး ဘီယာသောက်ပြီးရင် လေချဉ်တတ်တဲ့အသံမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ဗျ ။
မေကျောက်...ဟုတ်တယ် ကျနော်လည်း သဝေထိုးနဲ့တူတဲ့ဟာက ဘာ ရကောက်နဲ့တုတဲ့ဟာကဘာ အဲ့လိုမှတ်ထားတာပဲ နည်းနည်းတော့ဆင်တယ် တူတော့မဟုတ်ဘူး ။
မမေ....အဲ့လိုလေးတွေးသွားပေးတာကျေးဇူုး ကျနော့်လက်ရေးကမလှပါဘူး စာကိုတော့သေချာလေးလေ့လာဖြစ်လို့ အမှန်တွေတော့ရတယ်း)
ကိုညီ....အစ်ကိုကတော့ ကိုယ့်ညီလေးစိတ်ချမ်းသာအောင် တော်တော်ပြောတတ်တယ်ဗျ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်လည်း တတ်ချင်ပါတယ် သိချင်တဲံ့စာလုံးကို ချက်ချင်းမေးလိုက်တာပဲ ကံကောင်းတာက ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ထိုင်းစာတတ်တဲ့သူတွေကြီးပဲလေ ။
ကိုမောင်လေး.... ထိုင်းစကားပြောချင်ရင် ရေညှိကိုပါစပ်ထဲငုံထားပါ ချွဲ၂လေးပြောရလို့ ထိုင်းမလေးတွေ “ အလိုင်နာခါ ” အဲ့တာကိုပဲ ချွဲသံနဲ့ပြောလိုက်ရင်ကိုပဲ အူတွေယားယား လာကော ။
မလဲ့.... ဟဟား ကျနော့်ကောင်းကွက်လေးတွေပဲတွေ့သွားတာမို့ဖြစ်မယ်း) ထိုင်းစာတကယ်ပဲတတ်ချင်နေတယ် ကြိုးစားနေတယ်ဗျ ။
မိုးခါး...နင်ကတော့ ငတ်ဖို့ပဲသိတယ်နော် ။
ကိုအုပ်....အသက်ကလေးရလာတော့ ဦးနှောက်က သိပ်မပြေးတော့ဘူးဗျး)
အိန်၈ျယ်လှိုင်...ဟုတ်ကဲ့ပါ အားပေးသွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
မချော.....အဲ့လိုရောက်ဖို့နေ့ကအဝေးကြီး လိုအုံးမှာ အစ်မတို့လို ဘာသာပြန်ကျွမ်းတဲ့သူဖြစ်ချင်တာ ခုမှ နာမည်လောက်ပဲရေးတတ်ဖတ်တတ်သေးတား)
ဆဘိုင်ဒီခပ်း) ခွန်ကော့ ဆဘိုင်ဒီမိုင်း
Sawadee Kha, nong! Di cai thi dai ruu cak kha.
ယိုးဒယားလို အပြောသင်မလားလို့ စိတ်ကူးတာ တစ်လုံးပြောတိုင်း နှာခေါင်းယားလာတာနဲ့ မသင်ဖြစ်သေးဘူး သူတို့လူမျိုးက စကားပြောရင် နှာသံနဲ့ပြောတာ အတော်ခက်တယ် ကိုယ်က အာသံနဲ့ပြောတဲ့ လူမျိုးဆိုတော့
blog တွေ လျှောက်ကြည့်ရင်း အကို့ Blog ပေါ် ရောက်လာတာပါ။
ကျွန်တော်လည်း လက်ရှိ ထိုင်းမှာ ကျောင်းတက်နေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသား အချင်းချင်း တစ်ပြည်တစ်ရွာ ရောက်ချိန် ခုလို Blog ပေါ်မှာ
တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ် ခင်ဗျာ။